ISKU AADKA SERIE A: Kulamada ay ciyaarayso koox kasta oo ka mid ah kooxaha waawayn ee Talyaaniga + Sawirro – Gool FM
ISKU AADKA SERIE A: Kulamada ay ciyaarayso koox kasta oo ka mid ah kooxaha waawayn ee Talyaaniga + Sawirro
Raage July 26, 2017
(Roma) 26 Luulyo 2017 – Halkan ka daawo samaynta isku aadka horyaalka Talyaaniga fasalciyaareedka 2017-18 ee Serie A. Halkan ka EEG jadwalka oo idil.
Horyaalka Talyaaniga ee kal-ciyaareedka 2017-18 ayaa oodda laga qaadi doonaa Agoosto 19-20, isagoo soocn doona ilaa Maajo 20, 2018; iyadoo xilli hore lasoo afjarayo si xulka Talyaaniga loo siiyo xilli uu iskugu diyaariyo Koobka Adduunka 2018.
Labada todobaad ee ugu horreeya ee bisha Agoosto, waxaa inta badan la dheeli doonaa Axad, waloow ay jiraan qorshayaal laga yaabo in qaybaha xiga la kala ciyaaro Jimce ilaa Isniin.
Inta haatan la xaqiijiyay 2 kulan ayaa dhici doona Sabti kasta (17.00 UK iyo 19.45 UK), deetana Axadda hal kulan baa qabsoomaya 11.30 UK, 6 kulan ayaa deeto Axadda dhacaya 14.00 iyadoo lagusoo afjarayo 19.45 UK).
Waxaa jiri doona kulamo dhacaya bartamaha todobaadka oo ku kala beegmaya 20-ka Sebtember, 25-ka Oktoobar iyo 18-ka Abriil.
Koobka Italian Super Cup oo dhexmaraya Juventus iyo Lazio ayaa Stadio Olimpico oo ku yaalla Roma ka dhici doona Agoosto 13.
4ª) ROMA-Hellas Verona
16ª) Chievo Verona-ROMA
3) JUVENTUS-Chievo Verona
19) Hellas Verona-JUVENTUS
1) Hellas Verona-NAPOLI
12) Chievo Verona-NAPOLI
10ª) Chievo Verona-MILAN
11ª) Hellas Verona-INTER
15ª) INTER-Chievo Verona
2) Chievo Verona-LAZIO
6) Hellas Verona-LAZIO
DEG DEG: Isku aadka horyaalka Talyaaniga oo la sameeyay (Arag jadwalka)
Kooxda AC Milan oo caawa gaartey magaalada Craiova + Sawirro & Muuqaal